ဒိုပါမငျ စမျးသပျမှု နှငျ့ ဘောနပျပေးခွငျး အနုပညာ | မာသငျ
ဒိုပါမငျ စမျးသပျမှု နှငျ့ ဘောနပျပေးခွငျး အနုပညာ
1954 ခုနှဈမှာ ဦးနှောကျနှငျ့ အာရုံကွောဗဒေ ပညာရှငျ နှဈဦးဖွဈကွတဲ့ James Olds နဲ့Peter Milner တို့ရဲ့စမျးသပျမှုတဈခုက လူသားတှရေဲ့အပွုအမှု နဲ့ပတျသကျပွီး ဒိုပါမငျ ဆိုတဲ့ ဦးနှောကျကနေ အာရုံခံစားမှုအလိုကျ ထှကျတဲ့ ဟျောမှုနျးတဈမြိုးအကွောငျးကို သိလာခဲ့ကွတယျ။
စမျးသကျမှုမှာ ကွှကျတှကေို ခှဲစိတျပွီး (implanting electrodes) ထဲ့သှငျးပွီး ဦးနှောကျကနေ ဒိုဘာမငျဟျောမှုနျးထှကျရှိမှုကို ထိနျးခြုပျကနျ့သတျလိုကျတဲ့အခါ အဲဒီကွှကျက အစားလဲမစားခငျြ၊ ရလေဲမသောကျခငျြ၊ မိတျလဲမလိုကျခငျြတော့ပဲ နောကျဆုံးမှာ သဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ။
နောကျတော့ ပွောငျးပွနျအားဖွငျ့ ဒိုဘာမငျဟောမှုနျးမြားမြားထှကျစတေဲ့အခါ ကွှကျသညျ လုပျဆောငျခကျြတှကေ အားတကျလာတယျ။ တကျကွှလာတယျ။ လုပျခငျြကိုငျခငျြစားခငျြသောကျခငျြစိတျပို ပွငျးပွလာတယျ ဆိုတဲ့ အခကျြကို တှရှေိ့ခဲ့ကွတယျ။
စမျးသပျမှုရလဒျအနနေဲ့ဦးနှောကျကနေ အာရုံခံစားမှုဆိုငျရာ ဟျောမှုနျးတဈမြိုးဖွဈတဲ့ “ဒိုဘာမငျ”ဆိုတဲ့ အရာသညျ အပွုအမှု၊ ဆန်ဒပွငျးပွစိတျတှအေပျေါမှာ မြားစှာ သကျရောကျလှမျးမိုးမှုရှိတယျဆိုတာ သိခဲ့ကွတယျ။
နောကျပိုငျးတဖွေးဖွေးနဲ့ လူသားတှရေဲ့အပွုအမှု၊ အကငျြ့ နဲ့ ဆန်ဒပွငျးပွမှု မြားသညျလဲ ဒိုဘာမငျ သကျရောကျမှု ဖွဈတယျဆိုတာ သိလာကွတယျ။
( Habits areadopamine-driven feedback loop) ဆိုတဲ့အကငျြ့တဈခု ကို ဖွဈပျေါစဖေို့ ဒိုဘာမငျ ဆိုတာ အရေးကွီးတယျဆိုတာကို လူသားအပွုအမှုဆိုငျရာ ပညာရှငျမြားက လကျခံလာခဲ့ကွတယျ။
ဒိုဘာမငျဆိုတာ ကောငျးမှနျတဲ့နှဈခွိုကျစရာအတှအေ့ကွုံတဈခု ကို ရရှိခံစားလိုကျခြိနျမှာ ထှကျလာတဲ့ ဟျောမှုနျးဖွဈတယျ။
အဲဒီ ဟျောမှုနျးဟာ နောကျထပျ အဲဒီလို အပွုအမှု မြိုးထပျလုပျဖို့အတှကျ တှနျးအားဖွဈစပွေီး စှဲလမျးမှု နဲ့အကငျြ့ကို ပြိုးထောငျစတေယျ ဆိုတာ ကို နားလညျလကျခံလာကွတယျ။
ဥပမာအားဖွငျ့ လူတှကေို စှဲလမျးစတေဲ့အရာမှနျသမြှ ( မူးယဈဆေး၊ ဆေးလိပျ၊ အရကျ) တှဟော ဒိုဘာမငျ အမြားအပွားထှကျစတေယျ ဆိုတာ သိရှိလာကွတယျ။ အဲဒီ ဟျောမှုနျးက အပွုအမှုကို ထပျလုပျဆောငျဖို့ခန်ခာကိုယျတှငျးဆိုငျရာ တှနျးအားပေးတယျ။ ထပျလုပျတယျ။ ဟျောမှုနျးထှကျတယျ တှနျးအားပေးတယျ။ ထပျလုပျတယျ။ တှနျးအားပေးတယျ။ ဒီလိုနဲ့အကငျြ့ ဆိုတဲ့အရာဖွဈလာတယျ။
ထူးခွားခကျြက ဂိမျးဆော့ခွငျး နဲ့ဆိုရှယျမီဒီယာ (ဖဘေု့တျပှတျခွငျး) သညျလဲ ဒိုဘာမငျ ထှကျစခွေငျးဖွဈတယျ။
ပိုပွီးထူးခွားခကျြမှာ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားတှငျ ဘောနပျပေးခွငျး (Bonus ) ပေးခွငျးသညျလဲ ဒိုဘာမငျ ထှကျစနေိုငျခွငျးပငျဖွဈသညျ။
အောကျပါ ပုံကို ကွညျ့ပါ။ (ဒိုဘာမငျ ထှကျသညျ့ ပုံစံ ၄ မြိုးကို ရှငျးပွပေးထားသညျ။)
A. ပထမဆုံးအကွိမျ ဘောနပျဆုပေးခွငျး ခံရသောအခါ ဆုပေးခံရပွီးပွီးခငျြး ဒိုဘာမငျ သညျ မွငျ့တကျသှားသညျ။
B. ဒုတိယအကွိမျတှငျ ဘောနပျပေးမညျကို သိသောကွောငျ့ မပေးမှီအခြိနျကပငျ ဒိုဘာမငျသညျ မွငျ့တကျသှားသညျ။
C. နောကျပိုငျး ပေးနကြေ၊ရနကေဖြွဈသှားသောအခါ ရပိုငျခှငျ့တဈခုဖွဈသှားသညျ။ မပေးမှီရတော့မယျမှနျးသိခြိနျတှငျ ဒိုဘာမငျ မွငျ့တကျသှားသျောလညျး အမှနျတကယျ အခြိနျကရြောကျလာသောအခါ မပေးခဲ့လငျြ ဒိုဘာမငျသညျ အရငျလိုပုံမှနျအတိုငျးမဟုတျပဲ အောကျသို့ထိုးကသြှားစသေညျ။
D. နောကျမှ အကယျ၍ ပေးလငျြ အခြိနျလှနျသျောလညျး ဘောနပျရရှိသောအခါ B တှငျ မတကျသော ဒိုဘာမငျသညျ ဒီတဈကွိမျတှငျ မွငျ့တကျစလေသေညျ။
ထိုအထကျပါ ၄ ခကျြက ပွောပွနသေညျမှာ … လုပျငနျးရှငျသညျ ပိုကျဆံပေါ၍ ပေးနခွေငျးဆိုလငျြ ကိစ်စမရှိပါ။ သို့သျော ကောငျးမှနျသောရညျရှယျခကျြကို ပွုစုပြိုးထောငျရနျ ပေးခွငျး မြိုးဆိုလငျြ .. ပေးတတျဖို့တော့လိုပါမညျ။
ရညျရှယျခကျြ ကို နားလညျဖို့လိုသညျ။
ဘောနပျပေးခွငျး ရညျရှယျခကျြက အကငျြ့ကောငျးတဈခု (သို့) စိတျဓတျကောငျးတဈခုကို အားပေးအားမွောကျပွုလိုခွငျး ရညျရှယျခကျြ ဖွဈကွောငျး ဆိုလငျြ .. ပုံတှငျ (A) ကဲ့သို့ဖွဈပါစေ။
မဟုတျပါက .. ပေးနကြေ၊ ရနကြေ ဖွဈနပေါက ..ရပိုငျခှငျ့တဈခုကဲ့သို့ဖွဈသှားပွီး မရပါက ဒိုဘာမငျထိုးကသြှားပွီး ( C ) ကဲ့သို့ဖွဈသှားပွီး မှနျးခကျြ နှငျ့ နှမျးထှကျ မကိုကျပဲ ယုနျတောငျပွေး၊ ခှေးမွောကျလိုကျ၊ ဖွဈစခေငျြတာက စိတျအားတကျကွှမှု၊ ရလိုကျတာက လုပျအားကဆြငျးမှုမြားဖွဈပွီး ဖှတျမရဓားဆုံး၊ ယုနျမရတောကွေ ဖွဈတတျပါကွောငျး။ ။
ဒိုပါမင် စမ်းသပ်မှု နှင့် ဘောနပ်ပေးခြင်း အနုပညာ
1954 ခုနှစ်မှာ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဗေဒ ပညာရှင် နှစ်ဦးဖြစ်ကြတဲ့ James Olds နဲ့ Peter Milner တို့ရဲ့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုက လူသားတွေရဲ့ အပြုအမှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒိုပါမင် ဆိုတဲ့ ဦးနှောက်ကနေ အာရုံခံစားမှုအလိုက် ထွက်တဲ့ ဟော်မှုန်းတစ်မျိုးအကြောင်းကို သိလာခဲ့ကြတယ်။
စမ်းသပ်မှုမှာ ကြွက်တွေကို ခွဲစိတ်ပြီး (implanting electrodes) ထဲ့သွင်းပြီး ဦးနှောက်ကနေ ဒိုဘာမင်ဟော်မှုန်းထွက်ရှိမှုကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်လိုက်တဲ့အခါ အဲဒီကြွက်က အစားလဲမစားချင်၊ ရေလဲမသောက်ချင်၊ မိတ်လဲမလိုက်ချင်တော့ပဲ နောက်ဆုံးမှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
နောက်တော့ ပြောင်းပြန်အားဖြင့် ဒိုဘာမင်ဟောမှုန်းများများထွက်စေတဲ့အခါ ကြွက်သည် လုပ်ဆောင်ချက်တွေက အားတက်လာတယ်။ တက်ကြွလာတယ်။ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စားချင်သောက်ချင်စိတ်ပို ပြင်းပြလာတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို တွေ့ ရှိခဲ့ကြတယ်။
စမ်းသပ်မှုရလဒ်အနေနဲ့ ဦးနှောက်ကနေ အာရုံခံစားမှုဆိုင်ရာ ဟော်မှုန်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ “ဒိုဘာမင်”ဆိုတဲ့ အရာသည် အပြုအမှု၊ ဆန္ဒပြင်းပြစိတ်တွေအပေါ်မှာ များစွာ သက်ရောက်လွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်ဆိုတာ သိခဲ့ကြတယ်။
နောက်ပိုင်းတဖြေးဖြေးနဲ့ လူသားတွေရဲ့ အပြုအမှု၊ အကျင့် နဲ့ဆန္ဒပြင်းပြမှု များသည်လဲ ဒိုဘာမင် သက်ရောက်မှု ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိလာကြတယ်။
( Habits areadopamine-driven feedback loop) ဆိုတဲ့ အကျင့်တစ်ခု ကို ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဒိုဘာမင် ဆိုတာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို လူသားအပြုအမှုဆိုင်ရာ ပညာရှင်များက လက်ခံလာခဲ့ကြတယ်။
ဒိုဘာမင်ဆိုတာ ကောင်းမွန်တဲ့ နှစ်ခြိုက်စရာအတွေ့အကြုံတစ်ခု ကို ရရှိခံစားလိုက်ချိန်မှာ ထွက်လာတဲ့ ဟော်မှုန်းဖြစ်တယ်။
အဲဒီ ဟော်မှုန်းဟာ နောက်ထပ် အဲဒီလို အပြုအမှု မျိုးထပ်လုပ်ဖို့ အတွက် တွန်းအားဖြစ်စေပြီး စွဲလမ်းမှု နဲ့ အကျင့်ကို ပျိုးထောင်စေတယ် ဆိုတာ ကို နားလည်လက်ခံလာကြတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် လူတွေကို စွဲလမ်းစေတဲ့ အရာမှန်သမျှ ( မူးယစ်ဆေး၊ ဆေးလိပ်၊ အရက်) တွေဟာ ဒိုဘာမင် အများအပြားထွက်စေတယ် ဆိုတာ သိရှိလာကြတယ်။ အဲဒီ ဟော်မှုန်းက အပြုအမှုကို ထပ်လုပ်ဆောင်ဖို့ ခန္ခာကိုယ်တွင်းဆိုင်ရာ တွန်းအားပေးတယ်။ ထပ်လုပ်တယ်။ ဟော်မှုန်းထွက်တယ် တွန်းအားပေးတယ်။ ထပ်လုပ်တယ်။ တွန်းအားပေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အကျင့် ဆိုတဲ့ အရာဖြစ်လာတယ်။
ထူးခြားချက်က ဂိမ်းဆော့ခြင်း နဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာ (ဖေ့ဘုတ်ပွတ်ခြင်း) သည်လဲ ဒိုဘာမင် ထွက်စေခြင်းဖြစ်တယ်။
ပိုပြီးထူးခြားချက်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဘောနပ်ပေးခြင်း (Bonus ) ပေးခြင်းသည်လဲ ဒိုဘာမင် ထွက်စေနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အောက်ပါ ပုံကို ကြည့်ပါ။ (ဒိုဘာမင် ထွက်သည့် ပုံစံ ၄ မျိုးကို ရှင်းပြပေးထားသည်။)
A. ပထမဆုံးအကြိမ် ဘောနပ်ဆုပေးခြင်း ခံရသောအခါ ဆုပေးခံရပြီးပြီးချင်း ဒိုဘာမင် သည် မြင့်တက်သွားသည်။
B. ဒုတိယအကြိမ်တွင် ဘောနပ်ပေးမည်ကို သိသောကြောင့် မပေးမှီအချိန်ကပင် ဒိုဘာမင်သည် မြင့်တက်သွားသည်။
ပေးပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ပထမကြိမ်ကဲ့သို့ မထူးခြားတော့ပေ။
C. နောက်ပိုင်း ပေးနေကျ၊ရနေကျဖြစ်သွားသောအခါ ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုဖြစ်သွားသည်။ မပေးမှီရတော့မယ်မှန်းသိချိန်တွင် ဒိုဘာမင် မြင့်တက်သွားသော်လည်း အမှန်တကယ် အချိန်ကျရောက်လာသောအခါ မပေးခဲ့လျင် ဒိုဘာမင်သည် အရင်လိုပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်ပဲ အောက်သို့ ထိုးကျသွားစေသည်။
D. နောက်မှ အကယ်၍ ပေးလျင် အချိန်လွန်သော်လည်း ဘောနပ်ရရှိသောအခါ B တွင် မတက်သော ဒိုဘာမင်သည် ဒီတစ်ကြိမ်တွင် မြင့်တက်စေလေသည်။
ထိုအထက်ပါ ၄ ချက်က ပြောပြနေသည်မှာ … လုပ်ငန်းရှင်သည် ပိုက်ဆံပေါ၍ ပေးနေခြင်းဆိုလျင် ကိစ္စမရှိပါ။ သို့ သော် ကောင်းမွန်သောရည်ရွယ်ချက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ရန် ပေးခြင်း မျိုးဆိုလျင် .. ပေးတတ်ဖို့ တော့ လိုပါမည်။
လုပ်ငန်းများသည် ဘောနပ်ပေးတတ်ဖို့ လိုသည်။
ရည်ရွယ်ချက် ကို နားလည်ဖို့ လိုသည်။
ဘောနပ်ပေးခြင်း ရည်ရွယ်ချက်က အကျင့်ကောင်းတစ်ခု (သို့ ) စိတ်ဓတ်ကောင်းတစ်ခုကို အားပေးအားမြောက်ပြုလိုခြင်း ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုလျင် .. ပုံတွင် (A) ကဲ့သို့ ဖြစ်ပါစေ။
မဟုတ်ပါက .. ပေးနေကျ၊ ရနေကျ ဖြစ်နေပါက ..ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုကဲ့သို့ ဖြစ်သွားပြီး မရပါက ဒိုဘာမင်ထိုးကျသွားပြီး ( C ) ကဲ့သို့ ဖြစ်သွားပြီး မှန်းချက် နှင့် နှမ်းထွက် မကိုက်ပဲ ယုန်တောင်ပြေး၊ ခွေးမြောက်လိုက်၊ ဖြစ်စေချင်တာက စိတ်အားတက်ကြွမှု၊ ရလိုက်တာက လုပ်အားကျဆင်းမှုများဖြစ်ပြီး ဖွတ်မရဓားဆုံး၊ ယုန်မရတောကြေ ဖြစ်တတ်ပါကြောင်း။ ။